Andiany faha-24 ao Nosy Be : mitana ny maha hetsika iraisam-pirenena azy ny « Donia » | NewsMada
Andiany faha-24 ao Nosy Be : mitana ny maha hetsika iraisam-pirenena azy ny « Donia »
Hosokafana amin’ny « carnaval » ny alarobia 31 mey. Hisesy kosa ny andiam-pampisehoana ny alakamisy 1 jona hatramin’ny alahady 4 jona, ao amin’ny kianjan’Ambodivoanio, mandritra ny andiany faha-24 amin’ny « Festival Donia ».
Tafapetraka ny fandaharam-potoana ofisialy. « Tsaroako ny nanombohany, hitako ny niakarany, tsapako ny lazany, niainako koa ny fotoana nahalefy azy… Fa mbola eo foana ny Donia », hoy ny nambaran’i Vincenzo Sanna. Anisan’ireo nanorina ny “Festival Donia” any Nosy Be ny taona 1994 izy. Izy ihany koa no filoha mitarika ny Cofestin, izay mpikarakara amin’ity andiany faha-24 ity.
Nampahafantarin’ny filohan’ny Cofestin nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly, tetsy amin’ny Louvres Antaninarenina, fa mbola mitana ny maha hetsika iraisam-pirenena azy hatrany ny “Donia”. Porofon’izany ny fisian’ireo mpanakanto avy any amin’ireo Nosy rahavavy izay handray anjara amin’ity.
“Noho ny fiovan’ny fomba fijerin’ny mpitondra any an-toerana mikasika ny kolontsaina, tsy handray anjara ry zareo avy any Mayotte amin’ity. Handray mpanakanto manana ny toerany, toa an-dry Queen Favie avy any La Réunion, Aubin avy any Maurice, Vallen’Macken sy Eko Rod avy any Rodrigues ary i Nini Ramogotsi avy any Botswana, kosa isika amin’ity. Efa nohenoinay ny sanganasan’izy ireo, fa miandry ny fandraisan’ny mponin’i Nosy Be azy”, hoy hatrany i Vincenzo Sanna.
Andrasana i Dadi Love, AmbondronA…
“Fa maninona no mandray anjara matetika ny AmbondronA?”. Tsotra ny valiny raha ny nambaran’ny filohan’ny Cofestin hatrany. “Mitana ny lohalaharana amin’ireo tarika andrasan’ny mponin’i Nosy Be mba handray anjara amin’ny Donia ny AmbondronA, araka ny fakan-kevitra natao tamin’ny onjampeo”. Araka izany, miaka-tsehatra ny asabotsy 3 jona ry zalahy.
Fantatra koa fa handray anjara koa i Dadi Love, vokatry ny fanohanan’ny Orange Madagascar, ka hamarana ny fampisehoana voalohany izy ny alakamisy 1 jona. Mazava loatra fa i Fandrama no manakatona ny lanonana rehetra, izay efa mahazatra isan-taona rahateo.
Mivelatra, tsy amin’ny karazana mozika sy gadona ihany, fa amin’ny salan-taona koa ny hetsika. Anisan’ireo nomen’ny “Donia” sehatra ary handrandraina ho lasa lavitra ato ho ato i Basta Lion. Misy koa ireo mpanakanto tanora toa an-dry Jior’Shy, Rycia, Nathy ary Haramy, izay efa miaka-daza amin’izao fotoana izao.